China Palisade mpanamboatra fefy sy mpamatsy | Shoufan Metal
U wire type
Vy harato vy
Jiro tariby toradroa
Fefy nohamafisin'ny rafitra
Fantsika amin'ny tafo
Ny fefy palisade dia iray amin'ireo andiany amin'ny fefy. Ampiasaina any Angletera izy io amin'ny voalohany. Ankehitriny, ny fefy palisade dia be mpampiasa ao an-trano sy any ivelany. Ny fefy palisade fa tsy ny rindrin'ny biriky na fefy mavesatra dia manadio ny tontolo iainanao. Ampiasaina be io noho ny fanenjehan'ny tontolo iainana ...
Ny fefy palisade dia iray amin'ireo andiany amin'ny fefy. Ampiasaina any Angletera izy io amin'ny voalohany. Ankehitriny, ny fefy palisade dia be mpampiasa ao an-trano sy any ivelany. Ny fefy palisade fa tsy ny rindrin'ny biriky na fefy mavesatra dia manadio ny tontolo iainanao. Ampiasaina betsaka io noho ny fikatsahan'ny olona ny tontolo iainana, ny fahalalahana amin'ny fahadiovan'ny tena manokana ary ny fikatsahana ny fanaon'ny vahiny. Ny fefy palisade miaraka amina firafitra tsara sy fomba isan-karazany dia malaza sy be mpampiasa.
Akora: Taratasy vy avo lenta, ravina vy vita anaty lasopy vita amin'ny alim-bolo mafana, vy milomano mangatsiaka ary vy vy mihodina
Haavon'ny fefy: 600-1200-1800mm
Lahatsoratra: 50X50x4 mm
Paositra: Fefy 2400 avo -100 × 45
Paositra: Fefy avo 3000 - 150
Takelaka hazandrano: 40 × 8 140
Takelaka misy trondro: profil 40 × 8 215 lava W
"W" Pale: profil 71x21x3 W
Fanamboaran-dalamby: lohan'ny amboara M12x30 Bolt sy Shear Nut
Fametahana ny felana: M8x25 T Bolt sy Shear Nut na - Stainless Steel Huck Pin ary collar
Fanohanana Mid Bay: tsorakazo misy kofehy M12x500 sy voanjo 2x
Process: Fanitsiana, atsoboka mafana, plastika famafazana, fitsaboana fanoherana ny harafesiana PVC
fampiasana: Izy ireo dia ampiasaina ho fefy fiarovana na haingon-trano amin'ny tranobe, toeram-ponenana, indostria, fambolena, governemanta ao an-tanàna, sekoly, bozaka, làlana zaridaina ary fitaterana.
Ny fefy Palisade dia manana ny mampiavaka azy amin'ny tanjaka avo, henjana tsara, fitoniana amin'ny rafitra, fanoherana ny harafesina ary endrika tsara tarehy, fahitana mivelatra, vidiny ambany, loko isan-karazany, fomba ary mametraka mora foana
Ny famaritana mahazatra ny fefy palisade:
Ny tontolon'ny fefy palisade dia misy takelaka vy karbaona 17 ambany miaraka amin'ny karazana "D" na "W" karazana ambony.
Rehefa mampiasa ny fefy palisade, ny karazany manana sakany mahazatra 2,75m dia be mpampiasa. Ary ity karazana fefy palisade ity dia mora apetraka.
Haavo tontonana fefy 1m-6m
Fehin'ny tontonana fefy 1m-3m
Halavan'ny felana 0.5m-6m
Ny sakan'ny felana W hatsatra 65-75mm, D hatsatra 65-70mm
Ny hatevin'ny felana 1.5mm-3.0mm
Fiara zorony 40mm × 40mm, 50mm × 50mm, 63mm × 63mm
Ny hatevin'ny zoro 3mm-6mm
Lahatsoratra RSJ 100mm × 55mm, 100mm × 68mm, 150mm × 75mm
Paositra iray 50mm × 50mm, 60mm × 60mm, 75mm × 75mm, 80mm × 80mm
Ny hatevin'ny paositra 1.5mm-4mm
Takelaka hazandrano mahitsy na clamp 30mm × 150mm × 7mm, 40mm × 180mm × 7mm
Bolt sy voanjo M8 × No.34 ho an'ny fanamboarana hatsatra, M12 × No.4 amin'ny fanamboarana lalamby
Previous: Lahatsoratra fefy
Manaraka: Fefy vonjimaika
4x4 fefy vy tariby
Wire fefy mifono vy nandrisika
Fefy Wire Mesh Square
Lasitra fefy tariby tariby
Fefy Wire Wire Welded
Welded Wire harato ho an'ny fefy
Fefy tariby indroa
Fantsika tsy misy loha
Liusu Industrial Park, faritanin'i Dingzhou City Hebei
Nataon'i Sina tamin'ny Internet ny The Canton Fair tamin'ny volana Jona
Torolàlana momba ny fomba fanaovana filaminana?
Ny traikefa vitsivitsy amin'ny fisorohana COVID-19 amin'ny ...